ရမည်းသင်းမြို့၊ ရွာတန်းတိုက်နယ်၌ လူစုလူဝေးဖြင့် လာရောက်၍ နေအိမ်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရမည်းသင်းမြို့၊ ရွာတန်းတိုက်နယ်၌ လူစုလူဝေးဖြင့် လာရောက်၍ နေအိမ်များအား မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ရမည်းသင်းမြို့နှင့် ၈ မိုင်အကွာ တွင်ရှိသော ရွာတန်းတိုက်နယ်၊ သဲကျွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဈေးကွက်သစ် ကျေးရွာ၌ မတ်လ ၂၃ ရက် ညပိုင်းက လူစုလူဝေးဖြင့် လာရောက်၍ နေအိမ်များ မီးရှို့ဖျက်စီးမှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် နေအိမ်များနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နေအိမ်အချို့ မီးလောင် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများ ရှိခဲ့ပြီး ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားမှု၊ လူသေဆုံးမှုများ မရှိကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ နေအိမ်များ လာရောက်ဖျက်ဆီးသူများမှာ လူအင်အား ၂၀၀ ခန့် ရှိကြောင်း၊ မီးလောင်ကျွမ်းသွားသော နေအိမ်များမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နေအိမ် ၄၈ လုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် နေအိမ် ၅ လုံး၊ ဗလီတစ်လုံးတို့ ဖြစ်ကြောင်း ရမည်းသင်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“ညက လူတော်တော်များတယ်။ ကျွန်တော်ကအိမ်မှာ။ ကျွန်တော် ပွဲရုံက အခြားမှာ။ သူတို့ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေအိမ်နဲ့ ဗလီကို မီးရှို့တော့ ကျွန်တော်ပွဲရုံက ကပ်နေတော့ မီးလောင်တဲ့အထဲ ပါသွားတယ်။ ညက ထွက်ကြည့်ဖို့လုပ်တော့ အိမ်တံခါး ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ လေးခွနဲ့ လှမ်းပစ်လို့ အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်နေရတယ်။ မိုးလင်းမှ ပွဲရုံမီးထဲပါသွားမှန်း သိတာပါဟု” ရွာတန်းကျေးရွာမှ ပွဲရုံပိုင်ရှင် တစ်ဦးက ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် ရမည်းသင်းမြို့နှင့် ၇ မိုင်အကွာရှိ ရွှေဒါး၊ သာစည်အုပ်စုတွင်လည်း မတ်လ ၂၃ ရက် ည ၁၁ နာရီ ခွဲခန့်၌ လူအင်အား ၅၀ ခန့်က ချိတ်ပိတ်ထားသော အမဲခြောက်စက်ရုံ တစ်လုံး၊ စက်ရုံတန်းလျား နှစ်လုံး၊ လူနေ အိမ်တစ်လုံးတို့အား မီးရှုိ့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိတွင် ရမည်းသင်းမြို့၌ လုံခြုံရေးအင်အားများ တိုးချဲ့ချထားပြီး မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှ စ၍ အရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ခြင်း မပြုရန် အမိန့်ထုတ် ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
This entry was posted on March 26, 2013, in ဓါတ်ပုံများ, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
“နွား”သရမ်းကြီးလွတ်နေပြီ(သို့မဟုတ်)ရခိုင်ပဋိပက္ခ အစီရင်ခံစာမထွက်မီ အာရုံပြောင်းသလား … →